အကောင်းဆုံး Slit Seal နှင့် Folder နှင့် EPC Unwinder ပါသောအိတ ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ ဖြန့်ချိသူနှင့် Slit Seal နှင့် Folder နှင့် EPC Unwinder ပါသောအိတ စက်ရုံကိုဘယ်လိုရွေးရမလဲ။
ပုံစံ - SV-CTE Series
တြိဂံခေါက်ကိရိယာသည် ချောမွေ့စွာ နှစ်ထပ်အလွှာကို ဖလင်ခေါက်သည်။.
လုပ်ဆောင်ချက်များစွာကို ရောနှောအသုံးပြုခြင်း။,စတိုင်လ်အိတ်မျိုးစုံကို ထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။.
အထူး pneumatic တံခါးနှင့် ကြိတ်စက် နှိပ်စက်,ပင်မစက်နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီး ထွက်နိုင်သည်။-ပိတ်ဆို့ထားသော ကုန်ချောကို ကျွေးပါ။.
ခိုင်ခံ့ပေါ့ပါးသောဖွဲ့စည်းပုံ,ဘရိတ်နှင့်အတူ rolling wheel နှင့် ပူးပေါင်းပါ။,နေရာကို အလွယ်တကူ ပြောင်းနိုင်ပါတယ်။.
ရွေးချယ်နိုင်သော ပစ္စည်းကိရိယာများ:ကိုယ့်ကိုယ်ကို-ကော်ကိရိယာ,ပုလဲထည့်သည့်ကိရိယာ,punching ယူနစ်,နှစ်ထပ်တံဆိပ်ခတ်ကိရိယာ,block out-အစာကျွေးကိရိယာ.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.carrybagmachine.com/my/bag-machine-with-slit-seal-and-folder-and-epc-rewinder.html
SHENG-FON PLASTIC MACHINE CO., LTD. သုတေသန, ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး, ထုတ်လုပ်ခြင်း, ရောင်းချခြင်းနှင့်ဝန်ဆောင်မှုအတွက်စေ့စပ်တဲ့ professional ထုတ်လုပ်သူ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့သူဖြစ်ပါသည် Slit Seal နှင့် Folder နှင့် EPC Unwinder ပါသောအိတ။ ကျနော်တို့တွင်တည်ရှိပြီး, Taiwan နှင့်အဆင်ပြေသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသုံးခွင့်ရှိသည်။ တင်းကျပ်သောအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုများနှင့်စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုအားဆက်ကပ်အပ်နှံကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့အကြုံရှိဝန်ထမ်းများအမြဲသင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေဆွေးနွေးအပြည့်အဝဖောက်သည်ကျေနပ်မှုရရှိစေရန်ရရှိနိုင်တယ်။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ထုတ်ကုန်မဆိုအမျိုးအစားအတွက်စိတ်ဝင်စားလျှင်အခမဲ့ခံစားရကျေးဇူးပြုပြီး ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
ယခုအချိန်အထိကျွန်ုပ်တို့သည်အကောင်းဆုံး Slit Seal နှင့် Folder နှင့် EPC Unwinder ပါသောအိတ ထုတ်ကုန်များ၊ ထိုင်ဝမ်မှအိုစီနီးယား၊ ဂျပန်၊ တောင်ကိုရီးယား၊ အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများနှင့်ဥရောပနှင့်အမေရိကန်နိုင်ငံများအထိ၊ ၀ ယ်သူပိုမိုများပြားလာသည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကိုရွေးချယ်ကြပြီးထုတ်ကုန်များသည်ကမ္ဘာအနှံ့အပြားတွင်အနိုင်ရခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်စိတ်ရင်းမှန်ဖြင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကောင်းမွန်သောပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်နိုင်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆက်သွယ်ပါရန်ကျွန်ုပ်တို့အခမဲ့ဆက်သွယ်ပါ။ သင့်လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်သတင်းအချက်အလက်၊ အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးထုတ်ကုန်များ၊ စျေးအသက်သာဆုံးစျေးနှုန်းနှင့်လျင်မြန်သော ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့အခိုင်အမာယုံကြည်သည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များလိုအပ်ပါကကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ။
အကောင်းဆုံး Slit Seal နှင့် Folder နှင့် EPC Unwinder ပါသောအိတ ကိုရှာဖွေပြီးစျေးဝယ်ရန်အတွက် Taiwan မှစက်ရုံတစ်ခုမှထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားဖြန့်ချိသူ၊ ဖြန့်ချိသူ၊ OEM နှင့် ODM တို့၏အမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးကိုသိရန်လိုအပ်သည်။